Kana iwe tarisa nzira kuti vanhu dzapfuura, tinogona kutaura kuti huru mumiririri homo sapiens yagara zvinangwa zvitatu: kurarama, kudzidza uye pakusika. Kana mune rusarura mibvunzo okutanga regai simuka zvachose, vamwe vanoda diki kuchengetedza.
Kubva pakutanga vanhu kuti apone tinyatsoziva yakapoteredza chokwadi, kuti kurinzwisisa, kudzidza, kuwedzera miganhu zivo yavo uye kunyaradzwa. Zvikuru sezvingatarisirwa, zvakanditorera nesimba - saka vakasikwa zvokushandisa vokutanga uye kuvhima, saka kwakanga bako mifananidzo, iyo yakava pokutangira okugadzira zvinhu.
Art nesayenzi zvichiri kwakabatana kunyatsotevera, rinomiririra panguva imwecheteyo zvachose pakatarisana, asi nopindirana zvinhu zvikuru.
Chokwadi, vatsvakurudzi ounyanzvi yose kuonekwa uye dzimwe wefizikisi kana programmers anogona nesimba nharo pamusoro kukosha zviitiko izvi muupenyu hwomunhu. Zvisinei, unyanzvi uye sainzi, ndezvokuti, chaizvoizvo chokuita akatibvunzisisa, uye dzimwe nguva ndivo chete, anenge indivisible rose.
Zvisinei, kana tiri kutaura pamusoro maitiro zvinhu uye Misiyano, vanofanira kuteerera zvinhu yaingowanikwa chete mumwe mananara pasi kukurukurwa. Kudivi rimwe, iwe uri chiito chaicho okugadzira zvinhu, kuonana chinhu yakakwirira, Watermark, dzisingaiti. Ndosaka vaGiriki vekare nheyo yebudiriro ano, vaiona nhetembo, mumhanzi uye yemitambo chimwe chezvinhu zvinokosha zvinoumba upenyu hwevanhu. Art nesayenzi Munokudzwa zvikurukuru Chokwadi, yakarurama, Kujeka zvinangwa, uye kana mumutsetse wokutanga tinogona kutaura pamusoro anenge risingaperi rusununguko, mune nyaya nesayenzi kakawanda kunogona chete kufungidzira.
Mumwe musiyano pakati zvinoriumba izvi upenyu hwevanhu hunogona sechinoitika zvavo chipfuro marongero. Kana uri nechinangwa pakusikwa, zvisikwa nzira huMwari, mhedziso mweya, kuti chinangwa nesayenzi kazhinji ruzivo, pachisara mapatani yokuzikanwa.
Pane kunyange maonero kuti kudzidza Anouraya okugadzira zvinhu uye zvisikwa. Chero ongororo - nguva dzose rokugadzirira, kuparadzana oga ane mhando yokuziva zvigadziriswe basa.
Pakupedzisira, unyanzvi uye sayenzi siyana mwero Kuwanikwa munhu. Muchiitiko chokutanga tiri kutaura kutanga kunoratidzwa synesthesia,-soro nenhanho interoperability pamwe matete hungiso kwomweya womunhu, kunzwisisa kwesayenzi kunoda pamwero kurovedza, ruzivo mukwende, mafungiro chaiwo. Mabasa okusika kuwanikwa mukuru kana mudiki papi, nerimwe, nepo nzvimbo aiongorora nomusiki bhomba yenyukireya pasina kunyatsorovedzwa uye kuedza kuva zvisingagoneki.
Zvisinei, nokuti zvakasiyana kune mumwe, sezvo zvichiita sokuti pakutanga kuaona? Sezvineiwo, zvakafanana yavo iri kushorwa. Art - ndiko, sezvambotaurwa, pakusikwa, zvinobikwa chinhu chitsva, yakanaka ine vamwe anowanika zvinhu, kana gypsum, zvinoita kana mavara.
Asi kusikwa chinhu wokumwe kuti sayenzi? Handisi kubhururuka munhu muchadenga yakavakwa anoonga shasha kuti chikepe okugadzira? Ko haana yakagadzirwa panguva yokutanga teresikopu, kuburikidza izvo maonero rinovhura zvisingaperi nyeredzi? Iye akanga asiri panguva rinoumbwa wokutanga serum pakugadzira? Zvakaratidza kuti sayenzi - ichi ndicho chiito chete yokusika, uyewo chii taishandisa kushevedza unyanzvi.
Pakupedzisira, hatifaniri kukanganwa kuti muzvinhu zvakawanda mananara aya, pfungwa kuti upenyu hwedu kwete zvakafanana, uye vanenge zvakafanana. Somuenzaniso, kuti bhuku N. Boileau - huru Manifesto kuti classicism. Kudivi rimwe, iri chaiwo basa mabhuku. Kune vamwe - masayendisiti bhuku umo Akatsanangura nharo uye akaenzanisa dzinokosha aesthetic nenheyo nguva yake.
Mumwe muenzaniso ndiro basa Leonardo da Vinci, uyo kunze mifananidzo yakagadzirwa avo vanodhirowa, raanoziva, vakadzidza anatomi, physiology kwevanhu. Muchiitiko ichi zvakaoma chaizvo kuti asarudze, aiva nounyanzvi kana basa nesayenzi.
Pakupedzisira, tinofanira kuenda nhetembo. Pakutanga, ndiye chete mashoko zvakanaka dzikarongwa, izvo, akavonga senhetembo kurichinja kuva mabhuku acho. Asi sei kurongwa murayiro uyu? zvikuru sei nesimba kunodiwa munyori kuti ariwana? Chii chakaitika anofanira kuwana izvozvo? Zvakaratidza kuti kunyora nhetembo - asiwo sayenzi.
Creators uye vaongorori
Saka kana takasarudza pamusoro chaizvo dambudziko, ticharamba kuiripa pedyo, zvikuru wakaoma ziso. Kazhinji varume sayenzi uri tiri mumwe chete vamiririri rwevanhu. Dante Alighieri Somuenzaniso, kuwedzera kune pachena chavanopinda kune mabhuku nyika inogona kuwedzerwa kuna kunoshamisa uye vanyori venhau dzakaitika. Kuti kuanzwisisa, unongofanira kuva kuverenga ake "Comedy Divine".
Lomonosov, akavapindurawo, vakabudirira kuita kemisitiri uye wefizikisi, asi akava nomukurumbira sezvo nemunyori dzakawanda mabasa ari pakati ode Genre, uyewo mumwe vanodzika mitemo iri mumhuri classicism.
Mienzaniso iyi - chete minuscule, chikamu uwandu nenhamba, iro rinobatanidza maviri kumativi mari.
Science rinokosha bapiro
Hatigoni kutaura kuti kwete chete munyika wefizikisi uye masvomhu rwokuchengeta? Kune mhando dzakawanda basa yesayenzi, kure yakarurama kukarukureta nzira, kwemvura kana kuitisa kuedza pasango chirimwa kugarisana.
Zvikuru chokuita raishanda chisingadambuki anogona kunzi nokuratidzwa makanaka uye nevanhu. Mamiriyoni philologists, tsika uye vanachiremba kushandira emakore kunzwisisa kwete unyanzvi chete, asiwo zvenyika kuburikidza kwayo prism. Kazhinji, kudzidzwa mabhuku basa yakakodzera zvinoita kuti tikwanise kunzwisisa kwete chete hunhu sangano rayo, asi iyo zvakanyorwa, nekuzarurwa kumativi mutsva murume, kuwedzera huripo mufananidzo wenyika yako, hapana zvishoma zvinokosha nuance.
Kukurukurirana uye maonero
Zvikuru titsigire chitendero, uzivi, sainzi, unyanzvi. Kuti aratidze izvi, kuteerera Middle Ages. chechi aiva muparamende zvakanga zvichiitika munyika ino. It akatara canons ounyanzvi nokusanyanya nezvenyaya yacho, yezwi kuvandudza, apo koporo haana basa.
Vangani Vanyengeri, vazivi uye masayendisiti vakanga ipapo wapiswa padanda Raibvunzurudza, sezvo raingoreva muchechi dzavo zvakaratidzwa nyika, kana kukumbira kuti chimiro, vhoriyamu iri mufananidzo muna icon!
Panguva imwe cheteyo, ndiyo kereke uye chitendero akapa nyika mimhanzi uzivi yakava hwaro akawandisa enganonyorwa, iye zvino chaiwo mabhuku.
Kubvira pamazuva Greece yekare pane tsanangudzo the artist (mu wakafara pfungwa shoko) sezvo svikiro, munhu rainyanya kukosha pakati pedenga nenyika, naMwari uye vanhu. Ndokusaka mwarikadzi unyanzvi uye nesayenzi anomiririrwa mu mungano muna pfumbamwe guises. Muchiitiko ichi ndicho Chokwadi, afungisisa anoti, nechinopiwa kurudziro kuna vemifananidzo uye nyanzvi, venhoroondo uye vaimbi. Zviri ngaaongwe kwavari kuti munhu waigona, maererano mungano, kuti asike runako uye kutarisa mhiri mujengachenga, uye hazvinzwisisiki kwezvose.
Saka, munhu anoita chinenge rusununguko ine mhando clairvoyance. Zvinofanira kucherechedzwa kuti maonero aya hakusi kusina pakwakavakirwa. Somuenzaniso, Musiki yokufungidzira "20,000 Leagues Under Gungwa." Sei iye kuziva pamusoro ruzivo zvichaitika kuburikidza kwemakore? Kana chete Leonardo da Vinci akafanotaura mberi sangano kunyange vasati kufunga nezvazvo vose vanhu ...
Chikanganiso ndiko kufunga kuti chete womufananidzo anomuzarurira zvisingazivikanwi. Munyika mukuru yesayenzi vakafunga nezvemienzaniso yakadai pane chihombe chitsama. The kupfuura nomukurumbira vavo periodic table, vaifungidzira musayendisiti ari nechepamusoro nemakadhi.
Kana Gauss, uyo ndikaona muchiroto nyoka kuruma pachake muswe wayo. Zvakaratidza kuti sayenzi hapana kubudirana pachena zvishoma yaingowanikwa zvausingazivi, otherworldly, afenda, kuti vaimbi pasina zvishoma zvakarurama kunotemwa pamusoro nzwisisa chechetere.
Zvauchafanira kuita, uye vanhu nesayenzi uye uri basa rake ndivo chete chinangwa chinokosha - kuvandudza nyika. Mumwe nomumwe wavo kunoita kuti upenyu hwedu zvikuru yakanaka, nyore, yakachena, kana pane, muchiitiko ichi pakusarudza nzira yako, nevamwe vose.
Corpus callosum sezvo kubatana mbiri pfungwa hemispheres
Sei zvisvundu plasticine kuumba mifananidzo anogutsa vana nedanho mupfungwa basa
Arambe achirema vepasi. The kudzidza nyika
The degeneracy of majini code: zvinokosha
Science - chii ichi? Definition, musimboti, zvinangwa, nzvimbo uye basa nesayenzi
Chrematistics - a vapfume nesayenzi. Dzidziso Economic naAristotle
Pashure Troubles. Russia muzana remakore rechi17. Socio-zvoupfumi
A Mazano shoma uye Quick sei kuti anovava makabheji
Nzira yekuita chifu che "Maynkraft" uye kuti ungazviita sei
Simba resimbi: deposits, storage. Metallurgy of ferrous metals
Game "Arheydzh" - makirasi, description, inobudisa vanhu uye vanorumbidza
Electronics uye vanhu
Ndezvipi zvikamu zvakasiyana zvemwedzi zvinotitadzisa isu?
Chii chakasiyana t-shirts motokari chigaro anofukidza kubva?
Vamwe zvinofadza zvine chokuita Germany
Glycerin nokuti Hair